Umkhosi Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukulinganisa amandla akho aphambili nge-intuition kunye nemfesane.
Intsingiselo yekhadi le-tarot «Umkhosi»
La Ikhadi leTarot loMkhosi limela indalo, ethi yona, nangona ingasendle ngendlela yayo yakudala, yenziwe ekhaya ibe yeyona nto ifihlakeleyo kunye necocekileyo, icala lethu lobufazi, umntu wethu wangaphakathi. Umnqweno kunye nokuthanda kwethu kwendalo akufuneki kwaphulwe, kodwa kuphuculwe kwaye kungeniswe ezingqondweni, ukuze onke amanqanaba endalo abe nokuvumelana.
La amandla omphefumlo womfazi aqukethe amandla okholisayookanye inokukhulisa kwaye ibangele intsebenziswano yabanye, ithobe amandla aphazamisayo ngokulungelelanisa iyantlukwano kumoya wokudibana okuhlangeneyo.
Cacisa ngokucacileyo phakathi kwe-ego yakho kunye nesiqu sakho esinomdla.
Ikhadi loMkhosi ikucebisa ukuba uziqeqeshe ngokuzithemba Ukwahlula umdla wakho kubulumko obukhanyiselweyo. Chonga ngabom intuition yakho, nokuba ichasene neminqweno ye-ego yakho eneenkani.
Banga kwaye ulindele okufanayo nakwabanye abanamandla athile kule meko. Hayi ungabacela umngeni wokuba baphile kwinqanaba eliphezulu ukuba awukazenzeli okwangoku. Ukuphembelela abanye ngokumisela umzekelo wengqibelelo. Ukuzithemba kwakho kuya kunyuka njengoko uphumelela kwiinzame zakho.